Tratry ny tsy fahasalamana io vazaha io ankehitriny, araka ny fanairana nataon’olona avy any Belo sur Mer voarain’ny solontenam-panjakana ao Menabe, ary dia efa nisy iraka nalefa any an-toerana naka io vazaha vavy io ny atoandro teo, ho eto Morondava hamantarana ny fototr’aretiny.
Any Ambanja indray dia lehilahy tonga avy any Bordeaux –Frantsa no hita mivezivezy mampiahiahy ny olona. Isan’ireo Malagasy tonga tao anatin’ny fe-potoana hatramin’ny 19 marsa 2020 nomen’ny fanjakana hodian’ireo te hiverina an-tanindrazana ity lehilahy iray ity. Vao tonga avy any Bordeaux any izy, ary mandehandeha eto an-tanàna, ary diso fantatra, ka mampiahiahy ny olona indrindra manoloana ny fisian’ity COVID-19 ity ka hanairan’ny mponina ny manampahefana.
Any Sambava ihany koa dia misy olona roa avy tany Frantsa no tafiditra an-tanàna. Ny iray monina ao Ambodisatrana ary ny faharoa vehivavy any Andapa-II Kaominina Analamaho, toerana somary lavidavitra ny renivohitry ny Distrika Sambava. Manao fanariana ny mponina manodidina hoe « misy vahiny avy an-dafy tonga aminay ato ka mampiteraka savorovoro ». Ny alakamisy 19 martsa lasa teo no nahatongavan’izy ireo tany Sambava. Ankoatra ireo dia nampiahiahy ny mponina ao Ambolimadinika Kaominina Nosiarina Sambava ihany koa ny nahita ireo mpivahiny miisa 12 vao tonga avy any Manakara. Tena mila fehezina haingana ny tranga toy izao fa sao miteraka savorovoro any anaty fiarahamonina.